Rapha ကိုရောင်းမှာလား - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > Rapha မော်ကွန်းရောင်း - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
Rapha မော်ကွန်းရောင်း - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
ပေးထားသည်Raphaပုံမှန်အားဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းစတိုးနှင့်ကလပ်အိမ်များမှတိုက်ရိုက်ရောင်းချသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အမင်းလျှော့စျေးမခံရသည့်အတွက်မသိရသေးသော်လည်းသင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်နေရာအနည်းငယ်ရှိသည်။Raphaအပေးအယူ။21 2021 ။
Rapha သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Simon Mottram တည်ထောင်ခဲ့သောအဆင့်မြင့်စက်ဘီးစီးအထည်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အဝတ်အထည်များအတွက်အကြီးဆုံးစက်ဘီးစီးတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Metrosexuals က Raphia ကိုသူတို့ရဲ့ဝေဖန်သူများကခေါ်ကြတာကြောင့်ကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းမြင့်မားမှုကြောင့် Marmite နဲ့နှိုင်းယှဉ်လေ့ရှိပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဟာချမ်းသာတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်စပ်လေ့ရှိတယ်။ Mottram ကလူအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်၍ အချို့ကိုမချစ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်အဆင်ပြေသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းရရန်အတွက်၎င်း၏အရည်အသွေးကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်စိတ်မ ၀ င်စားဘဲစက်ဘီးတစ်စီးပေါ်တွင်သင်၏အကောင်းဆုံးနေရာကိုကြည့်သင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အချို့လူများကစက်ဘီးစီးခြင်းအဝတ်အစားကိုဖက်ရှင်ကဲ့သို့တူညီသောအလင်းရောင်ဖြင့်မတွေ့ရဟုမေးကြသည်။ လူတွေက£ 2,000 ထက်ပိုတဲ့စက်ဘီးကိုသုံးချင်ပေမယ့်မှန်ကန်တဲ့ဂီယာကိုမဖြုန်းတီးချင်ကြဘူး။ Rapha သည်အဝတ်အထည်များမှစက်ဘီးစီးခြင်း၊ အဖြစ်အပျက်များ၊ လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များအထိအရာအားလုံးကိုရောင်းချသည်။
သို့သော်အဝတ်အစားကုမ္ပဏီငယ်လေးတစ်ခုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ စက်ဘီးစီးခြင်းလောကကိုလွှမ်းမိုးရန်သူတို့ကို ဦး ဆောင်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူနေမှုပုံစံစတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာသလား။ Mottram သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်မစတင်မှီတွင် Mottram သည်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရပြီးနှစ် ၂၀၀ ကျော်ကြာရန်မှာကြားရန်အစည်းအဝေး ၂၀၀ ကိုခံရပ်ခဲ့ရသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းသည်ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့လူကြိုက်များခြင်းမရှိသောကြောင့်မည်သည့်ဘဏ်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုခြင်းမရှိသောကြောင့် အထူးသဖြင့် Mottram သည်အ ၀ တ်အထည်ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရန်ပုံငွေ ၂၀၀ အပြီးတွင် Mottram သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်သောပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၆ ဦး နှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု၏အရင်းအနှီးကိုနောက်ဆုံးတွင်ခေါ်ယူခဲ့သည်။ သူသည်စျေးကွက်ရှိစက်ဘီးစီးအဝတ်အထည်၏အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိခဲ့ပြီးအဝတ်အစားအများစုသည်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်း (သို့) ယုတ်ညံ့သည့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိသဖြင့်အခြားသူများကထိတ်လန့်စရာကောင်းသောဒီဇိုင်းများဖြင့်သာထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် Mottram သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Rapha ကို ၁၉၆၀ စက်ဘီးစီးသူအသင်းမှတဆင့် St.
ရက်ပ်။ ဘတ်ဂျက်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်မှုကြောင့် Mottram သည် Rafa သံရုံးကိုတစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲသူတို့ရဲ့အသစ်စက်စက်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အဝတ်အစားကစတင်စိတ်ဝင်စားလာပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ပထမဆုံးနှစ်မှာပေါင် ၃၀၀၀၀၀ ရောင်းချခဲ့တယ်။
ကုမ္ပဏီသည်တန်ဖိုးလေးခုဖြင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည် - အားကစားကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသင်၏ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အခြားသူများကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ပုံသက်သေဖြင့် ဦး ဆောင်ခြင်း၊ သည်းခံကြလော့ စဉ်းစားပါ၊ အမြဲတမ်းတက်ကြွပါ။ Rapha ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကပေကျင်းအိုလံပစ်မှာလန်ဒန်မှာကျင်းပတဲ့ Tour de France တက်ရောက်ပြီးယူကေမှာစက်ဘီးစီးခြင်းဟာပိုပိုပြီးလူကြိုက်များလာတဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာပျံသန်းမှုအစပြုခဲ့တာပါ။ Team GB ရဲ့စက်ဘီးစီးအဖွဲ့သည်ရွှေ ၈ ခု၊ ငွေ ၄ ခုနှင့်ကြေးတံဆိပ် ၂ ခုဖြင့်ကြီးစိုးခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ Tour de France ကိုအနိုင်ရခဲ့သည့် Team Sky မှ Bradley Wiggins၊ ဗြိတိသျှတို့၏အောင်မြင်မှုသည်စက်ဘီးစီးခြင်း၏လူကြိုက်များမှုကိုတိုးပွားစေခဲ့ပြီး Lycra ရှိ MAMIL: Middle-Old Men ဟုခေါ်သောစက်ဘီးစီးသူအုပ်စုအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
စက်ဘီးစီးခြင်းကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ Rapha ၏ထုတ်ကုန်များကိုလည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ပေါလ်စမစ်နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပူးပေါင်းပြီးအထူးသဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Team Sky အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုစတင်ပေးသောအချိန်တွင်သုံးနှစ်ဆက်ရှိနေလိမ့်မည်၊ သို့သော် Mottram သည်ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်။ မအောင်မြင်ပါ Rapha ကိုအခြားအ ၀ တ်အထည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်စေချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းကကလပ်ရုံတွေ၊ သီးသန့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေ၊ စက်ဘီးစီးသူတွေအတွက်လူမှုရေးကွန်ယက်တွေ၊ စက်ဘီးငှားရမ်းခနဲ့ကော်ဖီဈေးလျှော့ပေးတဲ့အသင်း ၀ င်တွေဖြစ်တဲ့ကလပ်အသင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်။ အခြားသူတွေအကြား။ အဝတ်အစားရောင်းအားကျဆင်းသွားပါကလုံခြုံရေးကိုပိုမိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည့် ၀ င်ငွေအရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်တစ်ခုကို Rapha ကရရှိစေသည်။ အဖွဲ့ဝင် ၁၃၀၀၀ ၀ န်းကျင်တွင်တစ်နှစ်ပျမ်းမျှပေါင် ၇၀ မှ ၁၂၀ ကြားပေးသောရာဖေးသည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုစတင်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
2017 ခုနှစ်တွင် Rapha, တစ်နှစ်£ 63 သန်းရောင်းအားနှင့်အတူ, Walmart အကျိုးတူမြို့တော်ကုမ္ပဏီ RZC Investments, £ 200 သန်းအဘို့ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကအမြတ်ငွေပေါင် ၁.၄ သန်းသာရရှိသောကုမ္ပဏီ၏မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သည်။
အောင်မြင်စွာရောင်းချခဲ့သော်လည်း Mottram သည်လူသိရှင်ကြားကြေငြာခဲ့သော်လည်းကုမ္ပဏီ၏သက်တမ်းကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်သော်လည်းကုမ္ပဏီ၏သက်တမ်းကိုတိုးတက်စေရန်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ရန်လူသိရှင်ကြားကြေငြာခဲ့သည်။ £ 15 စက်ဘီးစီးဂျာစီရောင်းတဲ့ Aldi နဲ့မနှိုင်းယှဉ်ချင်ဘူး။ Rapha သည် 2019 တွင်အမြတ်ငွေပေါင် ၅၀ သန်းအရှုံးပေါ်ခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်မှားကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သူတို့၏ရောင်းအားများသည်အထူးလျှော့စျေးနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများ၏တန်ဖိုးများမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲရန် Mottram သည်ခရီးသွားအေဂျင်စီလုပ်ငန်းကိုပိတ်ပစ်ရန်၊ ဝန်ထမ်းများကိုရာထူးမှဖယ်ရှားရန်နှင့်အနာဂတ်အတွက်မဟာဗျူဟာကိုပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် Rapha ရဲ့အနာဂတ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲ။ Rapha ကသူတို့သည်မေလ ၄ ရက်မှမေလ ၁၀ ရက်အကြားပထမဆုံး Rafa Cycling Club Championship ကို Zwift နှင့်ပူးပေါင်းမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ လူတိုင်းလူကြိုက်များသောစက်ဘီးစီးသမား Justin Williams နှင့်အုပ်စုလိုက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းများကိုကမ်းလှမ်းနေစဉ်အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲကိုယူပါ။ Rafa သည် Canyon-SRAM နှင့် EF Pro စက်ဘီးစီးခြင်း၊ အောက်ခြေလူတန်းစားနှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသောရန်ပုံငွေအတွက်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသောအသင်းနှစ်သင်းနှင့်အတူစီးနင်းလိုက်ပါ။ သူတို့ရဲ့အမြတ်အစွန်းကိုမျှဝေပြီးရေရှည်မှာသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုတိုးတက်စေမှာသေချာပါတယ်။
စျေးကွက်တွင်အောင်မြင်မှုနှင့်လွှမ်းမိုးမှုများရှိသော်လည်း Rapha သည်စက်ဘီးစီးသူများကြားတွင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးအချို့က ၂၀ ရာစု၏ဒဏ္legာရီများဝတ်ဆင်ထားသည့် Aldi ဂျာစီများကဲ့သို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုအချို့ကဆိုကြသည်။ အချို့ကမူတနင်္ဂနွေနေ့၌အရေးကြီးသောအရာများသည်သင်၏ ၀ င်ငွေမည်မျှရနိုင်သည်၊ Mottram နှင့် Rapha မှအရာအားလုံးသည်အရေးမကြီးဟုထင်မြင်သည်။ ဖောက်သည်က Rapha ကို ၀ ယ်သောအခါထုတ်ကုန်ကို ၀ ယ်ရန်မဟုတ်ပါ။ သူနှင့်အတွေ့အကြုံရှိခြင်းနှင့်သူနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းသည်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်
Rapha မှာသောကြာနေ့က Black ရောင်းချမှုရှိပါသလား။
TheRapha က Black သောကြာနေ့ရောင်းချမှုအခုတော့ ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းများကို ၃၀% လျှော့။ ခံစားခွင့်ရှိပြီးအထူးကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်နေ့စဉ်ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ TheRapha က Black သောကြာနေ့ရောင်းချမှုအခုတော့
ငါအွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှားတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါအဲဒီအတွက်ဂုဏ်ယူတာမဟုတ်ဘူး၊ စက်တင်ဘာလမှာဒီထွန်းပြက္ခဒိန်တွေစတင်ဝယ်ယူခဲ့တယ်။ ငါထွန်းပြက္ခဒိန်ကိုအရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါ eBay.com ကိုထိလိုက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုရှာခဲ့တယ်။ ငါဒီကိုငါလာခဲ့သူတွေထဲကအချို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ငါမယုံနိုင်ဘူး၊ ဒီဟာလူတွေပိုက်ဆံဖြုန်းနေတာပဲ။ ပြီးပြီ
ငါ့ပိုက်ဆံကုန်ပြီ ဒါကြောင့်ငါဟာငွေတွေ ၀ ယ်နိုင်တဲ့အကျော်ကြားဆုံးအစားအစာထွန်းပြက္ခဒိန်တွေအတွက်ပါ။ ဘယ်ကိုစရမလဲဆိုတာအတိအကျမသိပေမယ့်ဒီပြက္ခဒိန်ရဲ့နာမည်က Merry Piggin's Christmas လို့ထင်တယ်၊ ဒီဟာကထူးဆန်းဆန်းပြားတဲ့တစ်ခုပါပဲ။ Snaffling ဝက်ကုမ္ပဏီကဒါက ၀ က်သားထွန်းပြက္ခဒိန်ကိုခြစ်ခြင်း၊
အရမ်းထူးဆန်းတာပဲ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်ကိုဖြည်ချမယ်။ ဒါဟာအရသာဆိုတာဘာလဲဆိုတာမပြောပါဘူး၊ ကုမ္ပဏီရဲ့တံဆိပ်တစ်ခုပဲရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဒီကိုဖွင့်တော့မယ်။
ဒါကပုံပါပဲ။ ဝက်သားခြစ်ရာဆိုတာဘာလဲမသိဘူးဆိုရင် ၎င်းသည် ၀ က်သားအသားအရေကိုအခြေခံအားဖြင့်လုပ်ထားသည်။
ငါထင်တာကောင်းတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဆိုလိုတာကဒါကနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်၊ ဆိုလိုတာကငါကြိုးစားမယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကထူးဆန်းတဲ့အချက်ပဲ။ ဒါကထုံးတမ်းပြက္ခဒိန်ပေါ်မှာပါ။ ဆိုလိုတာကဒါကစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကထူးဆန်းနေတုန်းပဲ။ ငါတို့လည်းဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှာဖွင့်သင့်တယ် ၂၄ ရက်နေ့? ? ဒီတစ်ခါလည်းဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် အင်း၊ စမ်းကြည့်ရအောင်ငါတူတူပဲလို့ထင်တယ်
ဒီတစ်ခါလည်းသူကသူတို့တစ်ခုချင်းစီမှာရှိတဲ့အရသာတူတူပဲ။ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်မှာငါဖွင့်တော့မယ်မဟုပ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်စမတ်ကဝက်သားညှစ်နေတဲ့ပြက္ခဒိန်လိုဘာမှမအော်ဟစ်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအရသာတစ်ခုချင်းစီမှာအရသာအတူတူပဲ၊ နည်းနည်းစိတ်ပျက်စရာ။ သင်နှစ်သက်သောပြက္ခဒိန်များနှင့်သင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်။
နောက်ပြီးငါဂျယ်လီဘီလီထွန်းပြက္ခဒိန်ကိုဖွင့်တော့မယ်၊ မင်းဒါကိုသင်ချစ်တော့မယ်ဆိုတာမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲငါ Chrysler ဘဝကိုမုန်းတီးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပေးမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဂျယ်လီပဲတွေဟာအရသာအရမ်းကောင်းတဲ့ဒါမှမဟုတ် caramel popcorn လိုအော့အန်လိုအရသာတွေအတွက်ဆိုးတာပဲဖြစ်စေဒီဂျယ်လီပဲဒီဟာကတံခါးလေးကတကယ့်ကိုအေးမြတယ်၊ ငါပထမဆုံးဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ငါ့ကိုမုန်းတီးမယ်ဆိုတာငါသိပြီးသား။ ဒါတွေကစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်အမြဲတမ်းအရသာရှိတဲ့အတွက်ငါကအဖြူတစ်ကောင်ကိုဖမ်းတော့မယ်။ အဖြူသည်နို့သို့မဟုတ်အုန်းသီးဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဒါကအုန်းသီးပဲ၊ ဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့နို့ကိုငါချစ်တယ်၊ ငါတို့ဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး၊
ငါးသေကောင်လား၊ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ငှက်ပျောချောလား ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ
ဒါကောင်းလား၊ ဆိုးလားဆိုတာငါမသိဘူး ငါဆိုလို, ငါမျိုးကြိုက်တယ်။ ငါသည်ဤ Booger အရသာဖြစ်သင့်သေချာပါတယ်။
အောက်ခြေ bracket ကနှိပ်ခြင်း
ငါကြိုက်တယ်ထင်တယ် ကျွန်တော့်အမေကကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဒီဟာတွေကိုဝယ်ပေးခဲ့တယ်၊ နောက်ဆုံးနေ့ကသာမန်ထုံးတမ်းပြက္ခဒိန်တွေကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့သာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်ဆုံးသောနေ့ကအမြဲတမ်းချောကလက်ကြီး Santa Claus လိုပဲ။ သူတို့ဟာအနံ့ဆိုးသောခြေအိတ်တွေလား tutti-fruitti ပါ။
နောက်တစ်ကြောင်းကိုသွားကြစို့ ငါတို့လာမယ့်တခန်းကိုသွားပြီးငါမျှော်လင့်ထားတာနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခဲ့တာကိုငါမတွေ့ရသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်နေ့ကော်ဖီတစ်ခွက်အနံ့အရသာရှိတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုမင်းမတူညီတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ရတိုင်းနေ့တိုင်းကော်ဖီဖြစ်မယ်ထင်တယ် ကော်ဖီသောက်ခြင်းနှင့်လူများသည်နေ့စဉ်ကော်ဖီသောက်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ထုံးတမ်းပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်နားလည်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကဒါကိုဖွင့်တော့မယ်။ ပြက္ခဒိန်ရက်အများစုဟာတကယ်တမ်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှိသကဲ့သို့အကောင်းဆုံးသောထွန်းလင်းရန်ပြက္ခဒိန်စိတ်ကူးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၀ ခုကဲ့သို့ ၁၈ ရက်နှင့်ကျန်ရက်များနှင့်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်အခြေခံအားဖြင့်ရှိသည်။ အတူတူပါပဲဒါပေမယ့်ရှေ့ပိုင်းမှာ၊ ဒီဇင်ဘာလရဲ့ပထမဆုံး၊ ၂၄ ရက်ပါ။ ပထမနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကကြီးမားတဲ့ ၀ င်းဒိုးတစ်ခုလိုပါပဲ။ ဒါကငါထွန်းပြက္ခဒိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါပထမနဲ့ ၂၄ ခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ဒီတော့ဒီဇင်ဘာလရဲ့ပထမဆုံးဒီဇင်ဘာကကော်ဇောနဲ့ရော၊ အခွံမာသီးပါ ၀ င်ပြီး creamy caramel ပါ ၀ င်သည်။ ငါ 24th ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်အရသာ
လ၏နောက်ဆုံးနေ့တွင်သင်သည်အမှန်တကယ်ကော်ဖီတစ်ခွက်အပြည့်ရရှိသည်။ ကော်ဖီရဲ့နာမည်ကဆောင်းရာသီမှာပိုပူတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါကဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်လိုမူးမူးသောက်သင့်တယ်၊ ပြီးတော့ငါကဘေးတစ်ဖက်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်။ အိုင်ယာလန်မုန့်အရသာရဲ့ယန္တရားကိုငါစိတ်ဝင်စားလို့ပဲ။ ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကသစ်ကြံပိုးခွံပဲ။
ငါ creamy caramel လုပ်ပါလိမ့်မယ် အဲဒါကိုအရင်ကအသုံးပြုခဲ့ဖူးသလိုပဲအနံ့ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီဆေးကိုသေချာစွာဆေးကြောသင့်သည်။ ငါမသေဆုံးသေးလျှင် y- ငါမသေလျှင်၊ ယခုဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ Starbucks သည်စီးပွားရေးမှထွက်တော့မည်ငါကော်ဖီကိုတန်ဖိုးထားသူတစ် ဦး နှင့်မတူပါ။ အရသာကအရမ်းကိုကောင်းတယ်၊ အရသာရှိတဲ့အရသာပါ။ ဒါပေမယ့်အတုအတုမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ၃၀၀% ကကျွန်တော့်ကိုထောက်ခံတယ်၊ နောက်တစ်ခုကိုသွားရအောင်။ ငါနောက်တစ်ခုအတွက်တစ်ခုခုစားချင်တယ်။
ဒီဟာကဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးအတွက်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါ။ ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါစတိုးဆိုင်ထဲမှာဒီထွန်းပြက္ခဒိန်ကိုအစဉ်အမြဲမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်၊ အမေကဒီလိုပြောတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ pringles ထွန်းလင်းပြက္ခဒိန်ကိုငါ ၀ ယ်လိုက်တယ်၊ ဒီဟာဖြစ်သင့်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက ၁၂ ရက်ပဲရှိသေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအရမ်းများနေလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေအရမ်းများနေလို့ပါ။ အာကာသကိုယူပါ။ ၂၄ ရက်ဖြစ်ရင်စာအုပ်လိုဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့ငါဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ပထမဆုံးဖွင့်တော့မယ် ဒီဇင်ဘာလကအဲ့ဒီဟာကျွန်မအကြိုက်ဆုံးအရသာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒါက Texas Barbecue Pringles ပါ။ ဒီပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ္စမတ်၊ Merry Chrysler၊ Merry Christmas တို့ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ သင်ထွန်းပြက္ခဒိန်၏နောက်ဆုံးသောနေ့၌သင်ရရှိနိုင်တဲ့အရသာကိုတွေးမိသည်၊ ၎င်း၏ဆားနှင့်ရှလကာရည်။ တကယ်တော့ငါ Pringles ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရသာပါ။ ခရစ္စမတ်ကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီအတွက်မူရင်းအရသာကိုရရှိနိုင်သလိုသင်ဟာဒီအရသာတစ်မျိုးစီကိုဒီအရသာကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့မတူတဲ့အရသာများစွာရှိပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဖွင့်လို့ရမလား ဒါဟာကျေနပ်စရာကောင်းပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်သည်။
အိုး, ဒီဖြစ်ပျက်ရန်မထင်ထားပါ။ ဒီတော့ကင်အရသာဟာထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ်။ ဒုတိယကတော့ဆား၊ ရှလကာရည်၊ တတိယကတော့မူရင်း၊ စတုတ္ထကချဉ်သောမုန့်နှင့်ကြက်သွန်နီဖြစ်သည်။
ငါအရမ်းမြင့်မားသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားကဲ့သို့ငါဖြစ်၏။ နောက်တစ်ခုကနိဒါန်းမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီဟာကအရမ်းကိုထူးဆန်းတယ်
ဒါကဒိန်ခဲထွန်းကားတဲ့ပြက္ခဒိန်ပါ၊ ငါဒီကုန်စုံကိုကုန်စုံဆိုင်မှာ ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ထဲကများများကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက် ၀ ယ်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုတွစ်တာတွေကြောင့်။ တကယ်တော့ဒီဟာကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားရမယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကကောင်းရင်ကောင်းမယ်၊ ငါဒါကိုဖွင့်လိုက်ပြီလို့ခံစားရတယ် ငါဟာအတွင်းထဲမှာဒိန်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးပြက္ခဒိန်ကိုမကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်လှတယ်၊ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်တာကိုငါကြိုက်တယ်
ဘာလုပ်နေလဲ ငါစာအုပ်တစ်အုပ်ထွက်လာရင်၊ အစားအစာပဲလိုချင်တယ်၊ စာမျက်နှာတိုင်းကစားလို့ရတယ်။ သူတို့အားလုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ကျေနပ်စရာပါ။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့အားလုံးဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှာမင်းတို့ cranberry ဒိန်ခဲကိုမဖွင့်ဘူး။
ဒါကြောင့်ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်က // ဖြစ်တယ်။ ဒိန်ခဲအမျိုးအစားကိုဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူး Adam cheese ဒါဟာချောကလက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်ငါကဒါကိုထုံးစံပြက္ခဒိန်တစ်ခုလိုချင်တယ်ထင်တယ်။ ခရစ်စမတ်နေ့ကို ၂၄ ရက်မြောက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ခရစ္စမတ်ပွဲကိုနေ့တိုင်းကြက်ဥကြော်နဲ့ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ Gingerbread cheese ဆိုတာဘာလဲ။ ဒါဟာ Gingerbread အရသာပဲ။ ငါဟာဂျင်းဘောင်းဘီကိုမသုံးဘဲတစ်သက်လုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်။
နူးညံ့တယ် ဒီဟာကကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြိုးစားဖူးသမျှအဆိုးဆုံးတစ်ခုပါ။ ဒါဟာဂိမ်း -hh တူခံစားရ၏။
ငါဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေကိုဒီကတဆင့်သွားကြဖို့ရှိသည်ယုံကြည်ဖို့ငြင်းဆန်သူတို့ကတကယ်တော့ဒီကိုစား။ ဤသူသည်ကောင်းသောထင်နှင့်သူတို့က 24th အပေါ်ကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ ခရစ်စမတ်ပျက်ပြားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါပျော်တယ်လို့ထင်တယ်၊
သုံး၊ လေး၊ ငါး၊ ကိုး၊ ကွဲပြားခြားနားသည့်ဒိန်ခဲအမျိုးအစားများ၊ အထူးကြက်သွန်ဖြူနှင့်ငါလုံးဝမခံနိုင်သည့်အရာများပါရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကို eBay တွင်ဝယ်။ သူတို့ရောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သူတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ Advent ပြက္ခဒိန်တွေပါ။ ဒီတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပ်မသိဘူး။ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်ကိုငါဖွင့်ပြီးတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ပြက္ခဒိန်ပါ ။Wasabi မြေပဲ။ ၀ ါစဘီမြေပဲလိုခရစ်စမတ်အတွက်ဘာမှအော်မနေဘူး။ ခရစ္စမတ်နေ့မှာသင်အနည်းငယ်ထူးဆန်းနေလိမ့်မယ်။ ငါအရမ်းမျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအရမ်းစပ်တာကြောင့်သူတို့ကအရသာရှိတယ်။ ဒီတော့ ၂၄ ကိုဖွင့်ပါ။ ၂၄ ရက်နေ့မှာငါတို့ဟာဗာဒံသီးကိုသောက်ကြတယ်၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မုန်ညင်းတွေပါ။ ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်အခွံမာလိုပဲငါဟာဒိန်ခဲလိုထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုမျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အခွံမာသီးပြက္ခဒိန်ဒါဟာဗာဒံသီးအရသာအရသာ ၀ ဆာဘီအခွံကဲ့သို့အရူးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အရသာရှိပေမယ့်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ငါ 18Hotel ရောနှောကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
Nice ဒုတိယဆေးလိပ်သည်ဗာဒံသီးဖြစ်ပါတယ်။ အိုကေ။ ဒီတော့ဒီမှာရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
သိပ်အရသာရှိသည့်ဆေးလိပ်သောက်သည့် paprika coated မြေပဲသိပ်မများပါ။ အိုးဘုရား၊ ဒီဟာတကယ်ကောင်းတယ်၊ ဒီဟာတကယ်ကောင်းတယ်၊ ဒါမွှေးကြိုင်။
မြေပဲစေ့ ချိုမြိန်သောချောကလက်မြေပဲနှင့်ဒိန်ချဉ်စသည်များလည်းရှိသည်။ နောက်ဆုံးတော့ချောကလက်။ ဒီစပျစ်သီးပျဉ်ကိုစောင့်ပါ စပျစ်သီးပျဉ်ကိုမုန်းတယ်
ထိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုတာကဒီဟာကဒီလောက်ထူးဆန်းတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီဆောင်းပါးတွေတကယ်ရှိခဲ့တာကိုခင်ဗျားဘယ်လိုယုံနိုင်မလဲ။ beanies- အနံ့အရသာရှိတဲ့ကော်ဖီဒါမှမဟုတ် Pringles ကော်ဖီဆိုပါစို့။ တကယ်ကောင်းပါတယ်၊ အနည်းဆုံး ၁၀၀% ၀ က်သားကခြစ်ရာကတော်တော်ငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်လို့ထင်လို့၊ ဒါကအရသာပဲ၊ ပြီးတော့ငါကလည်း ဝက်သားခြစ်ရာ၏အကြီးမားဆုံးပန်ကာမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းကဒီဆောင်းပါးကိုကြိုက်နေတုန်းပဲလား? တကယ်လို့အဲဒီလိုဆိုရင်ဒီဆောင်းပါးလေးလိုမျိုးကြိုက်နှစ်သက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ တကယ်လို့ငါဟာဒီအရာတွေကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးစွန့်လွှတ်ပြီးငါ့မိသားစုထဲကလူတွေကိုနောက်ပြောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပေးသင့်တယ်လို့မင်းထင်ရင်၊ သူတို့ကိုရိုက်ကူးပြီးခရစ်စမတ်အတွက် youtube မှာတင်မယ်။
အဲဒါကကျွန်တော့်မိသားစုရဲ့ခရစ္စမတ်ကိုပျက်ပြားစေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ဖြစ်ပျက်လာအောင်ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ ငါဆောင်းပါးများအတွက်ဝယ်သောအရာတို့ကိုပယ်ရှားပေးပါ။
နာမည်ပေးတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ပေးမယ် ယောက်ျားတွေ၊ မင်းကိုငါချစ်တယ်၊ မနက်ဖြန်မှာငါတို့မင်းကိုတွေ့မယ်။
အဘယ်ကြောင့် Rapha ကိုမုန်းသနည်း
အတော်များများကဝေဖန်သူများRaphaပြည်တွင်းစက်ဘီးစီးသည့်နေရာ၏အမွေအနှစ်များကိုအမြစ်တွယ်နေသောသူတို့၏အားကစားနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ သူတို့အတွက်အဲဒါဟာသင်ဘယ်လိုလည်ပတ်သလဲဆိုတာပါ။ Henrie Westlake သည် (၄၂) နှစ်ဖြစ်ပြီးသူ၏လူကြီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးစက်ဘီးစီးခြင်းခံခဲ့ရသည်လိုလိမ့်မည်ဝတ်ဆင်စဉ်းစားဘယ်တော့မှမRapha ရဲ့အဝတ်အစား။
Walmart ဟာ Rapha ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသလား။
Raphaတစ် ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုကမှရောင်းချသည်ပိုင်ဆိုင်သည်ကWalmart$ 260 သန်းအမွေဆက်ခံ။
Rapha ကို Walmart ကပိုင်ဆိုင်ပါသလား။
Raphaတစ် ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုကမှရောင်းချသည်Walmart ကပိုင်ဆိုင်သည်$ 260 သန်းအမွေဆက်ခံ။
ယနေ့အရေအတွက်Raphaထုတ်ကုန်များကိုလန်ဒန်နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်တရုတ်ပြည်တွင်ပြုလုပ်သည်။ ဒါပေမယ့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအထိRaphaစွမ်းဆောင်ရည် roadwear ၏သော့အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ်လုပ်တယ်Far East ၌တည်၏။
ဗြိတိသျှထိပ်တန်းစက်ဘီးစီးအမှတ်တံဆိပ်Raphaဖြစ်ခဲ့တာရောင်းသည်? 200m များအတွက် Walmart မင်းဆက်၏အမွေဆက်ခံရန်။
Raphaပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမော်တော်ယာဉ် RZC အားဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ Theရောင်းရန်ရှိသည်စျေးနှုန်းမှာနှစ်သန်းအမြတ်နှစ်ဆခန့်သန်း ၂၀၀ ရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ပထမဆုံးကြည့်ရမယ့်နေရာကတော့ Rapha.cc မှာ Archive Sale ပါ။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လျှော့စျေးထုတ်ကုန် ၁၅၀ ကျော်ရှိတယ်။ ဆိုလိုတာက Rapha ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်တွေကိုဈေးသက်သာစွာနဲ့ရနိုင်တယ်။
ဒီကွမ်းသီးပြိုင်ပွဲကိပ်ကို Rapha မှာရောင်းနေတုန်းလား။
အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာ Rapha ၏ရောင်း ၀ ယ်ပစ္စည်းအများစုသည်အရွယ်အစားသေးငယ်သည့်အရာများ၌များသောအားဖြင့်သိုလှောင်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းအမျိုးသမီး Souplesse Race Cape သည်နက်ပြာရောင်နှင့်မှောင်မိုက်သောရေတပ်များတွင် XS မှ XL အရွယ်အစားဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ စျေးနှုန်းတစ်ဝက်ကျဆင်းသွားသည်နှင့်အမျှသူတို့မလွှဲမရှောင်ထွက်မရောင်းမီညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အများဆုံးစွယ်စုံဂျာကင်အင်္ကျီ, အဂန္ထဝင်ဆောင်းရာသီဂျာကင်အင်္ကျီကိုရေစိုခံနှင့် windproof ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားသည်ကြောင်းအသက်ရှူ insulator တွင်လည်း Polartec ပါဝါ Shield ကို Pro ထည်မှဖြတ်နေသည်။ မျက်လုံးတောက်တောက်တောက်တောက်ရှိသောအဝါရောင်ဖြစ်သော Chartreuse အရောင်သည်သင့်ကိုတစ်နေ့လုံးမြင်နိုင်ပြီးအကြီးမားဆုံးလျှော့စျေးကိုမြင်လိမ့်မည်။